Ngalaba-edepụtara na WordPress | Martech Zone
Mgbe onye ọ bụla na-agwa anyị ka anyị mee ihe a bit dị iche iche na anyị blog, anyị mgbe zaghachi na “Enweghị m ike ime na.”. Anyị na-eme ọtụtụ mmepe WordPress ma na-enwekarị mmasị na ọnụọgụ nke ngwaọrụ dị iji nweta ọrụ ahụ. Ternyaahụ, ọ bụ ọbịa ọbịa na-akwalite ihe omume na mgbasa ozi mmekọrịta… ihe mmado ahụ bụ na ọ bụ ngalaba edepụtara blog!
Anyị mekwara ya!
Ma, ọ dịrịghị m mfe. Anyị buru ụzọ wụnye nnukwu ngwa mgbakwunye akpọrọ Ndị na-ede akwụkwọ Gụnyere nke na-egosi na ọ bụ ngwa mgbakwunye ugbu a nwere ụfọdụ atụmatụ mara mma na ntinye ọnụ siri ike. Not naghị ebili ma na-agba ọsọ ozugbo ngwa mgbakwunye ahụ nọ n'ọrụ, n'agbanyeghị. Ebe obula ichoro otutu ndi edemede ka ha gosiputa na ndebiri, ikwesiri igbanwe koodu gi iji megharia uzo site na ndi ozo.
Maka anyị, nke ahụ pụtara imelite ọrụ.php nke nyere onye edemede anyị ozi na edemede anyị na peeji nke ụlọ na nke otu - yana otu ibe ederede blọgụ nke gosipụtara ngalaba edemede edemede n'okpuru akwụkwọ ozi.
Mgbe ị na-ede akwụkwọ ederede gị, ị nwere ike ịmalite dee aha ọzọ iji gbakwunye onye edemede nke abụọ (ma ọ bụ karịa). Ihe nrụrụ onwe onye zuru ezu na-azọpụta ndụ. Anyị nwere ihe dị ka ndị ode akwụkwọ 60 edebanyere aha na blọọgụ a ọ kachasị mma karịa ịhazi site na nnukwu ndepụta. Younwere ike ịdọrọ ma dobe usoro nke ndị edemede ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Obi dị anyị ụtọ, post ahụ gosipụtara na-akpaghị aka na peeji ndị edemede abụọ… yabụ o yiri ka ndị mmepe ahụ na-erigbu ụfọdụ koodu azụ azụ nwere ike ịdị adị na WordPress. Ahụwo m ụfọdụ isi koodu n'ime WordPress nke nwere ike ikwe ka atụmatụ a wuru n'ọdịnihu… mana ugbu a ngwa mgbakwunye na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị ka na-eche banyere ya, na ndị edemede ịgụnye folks si Automattic (WordPress nne na nna ụlọ ọrụ).
Anyi nwere otutu ndi ozo ebe o di ghara igosi - isiokwu mkpanaka (nke anyị ga-emelite mgbe e mesịrị), ndepụta RSS na iPhone App. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ihe niile anyị chọrọ!
Tags: Ndị edemede 2ndị edemede kwa postcoauthorswordpress ngalaba-ede akwụkwọwordPress coauthorswordpress otutu ndi dere
Ntuziaka Ntuziaka Pinterest na Brainhost
Ọkt 11, 2014 na 7:34 AM
Ndewo, a na m ejikwa WordPress.com Free blog maka ụlọ akwụkwọ nta akụkọ m ụlọ akwụkwọ, ọ ga-amasị m ịkọwapụta ndị dere ya, ọ bụghị nke ọma na aha mmanya, naanị n'ụzọ na ịpị aha ndị edemede na ederede ma ọ bụ banyere ibe ga-egosi ọkwa ahụ na ibe ndị edemede abụọ. Nwelite site na saịtị efu abụghị ajụjụ, yabụ enweghị m ike ịme nke a site na iji plugins, achọrọ m ịnwale izere ijikọta edemede ma ọ bụ mkpado. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkpado ma ọ bụ tọọ isiokwu na-enweghị ka ndị na - agụ ya wee hụ ya, mgbe ahụ ọ ga - abụ ụzọ kachasị mfe m ga -
Ọkt 11, 2014 na 5:48 PM
Kishan, amataghi m ihe osiso na-acho isi okwu nke puru inwe ihe ahu ichoro. Anyị na-eme ihe n'eziokwu enweghị ahụmịhe ọ bụla na ụdị n'efu.